ဗီဒီယိုအကြောင်းအရာလျင်မြန်စွာယနေ့သတင်းအချက်အလက်ဆက်သွယ်ပြောဆိုခြင်းနှင့်ဖြန့်ဖြူးဖို့အထိရောက်ဆုံးနှင့်လှုံ့ဆော်နည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်လာနေသည်။ ဒါဟာပရိသတ်တွေနဲ့အတူထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းနှင့်ကြည့်ရှုမှုကိုဆွဲဆောင်ဖို့အမှန်တကယ်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်ပြတ်သားပလက်ဖောင်းသို့ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ဗီဒီယိုကိုစျေးကွက်မရှိတော့ရုံကင်မရာနှင့်ဘာသာရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်: ကပါးနပုံပြင်-ပြောပြရန်မျိုးစုံဂရပ်ဖစ်ကြိုးကိုင်, စာသား-on-screen ကိုပြသနှင့်သင်တန်း၏အပေါငျးတို့သ (နှင့်ပိုပြီး) amalgamating ပါဝငျအဖြစ်တိုတောင်းတဲ့အတွက်သင့်ရဲ့မက်ဆေ့ခ်ျကိုသိရှိစေရန် (ဟဲလိုကျုံ့အာရုံကို span) တတ်နိုင်သမျှအချိန်!
ကော်ဖီမုန့်အချိန်ပြည့်အလုပ်အကိုင်အများအတွက်အလားအလာနှင့်အတူတချွတ်စီမံကိန်းများအတွက်တစ်ဦးဗီဒီယိုရိုက်ကူးကျွမ်းကျင်သူတွေအတွက်နှင့်အတူ ပူးပေါင်း. ဖွငျ့ဤဈေးကွက်သို့ headfirst ခုန်ဖို့ရှာနေတွေ့ဆုံ။ ကျွန်ုပ်တို့၏စံပြကိုယ်စားလှယ်လောင်းအနှစ်တစ်ထောင်မျိုးဆက်အကြောင်းကြားနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ဘယ်လိုသိတယ်နှင့်ဇာတ်လမ်းများကိုပြောပြရန်ဆွဲဆောင်မှု, အမြင်အာရုံနည်းလမ်းတွေကိုရှာဖွေနေထိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဖူလုံရေး၏အဆင့်မြင့်အားပူးပေါင်း & ဆက်သွယ်ရေးကျွမ်းကျင်မှုများနှင့်ပြောင်းလဲနေတဲ့ပြပွဲစတိုင်များ, အချိန်ဇယားနှင့်တုံ့ပြန်ချက်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နိုင်နှင့်အတူတစ်အယ်ဒီတာရှာဖွေနေပါတယ်။
ကျနော်တို့ကဗီဒီယို format နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြည့်ရှုရာမှတစ်ဦးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုကျလာသောကြောင့်တိုတောင်းသောဇာတ်လမ်းများကိုပြောပြရန်မည်သို့သိရှိသူတစ်စုံတစ်ဦးကိုရှာဖွေနေကြသည်
မုန့်တစ်ဦးချင်းစီကတခြား onCMB တွေ့သောသူငါတို့၏ကိုယ်အင်္ဂါ & စုံတွဲများ၏ပုံပြင်များ, နှင့် (အခြားသူတွေအကြား) feature အသစ်ပျေါလှငျတွေ့ဆုံကော်ဖီ၏အမှတ်တံဆိပ်ဇာတ်လမ်းကိုပြောပြ: ခေါင်းစဉ်များထံမှကွဲပြားစေခြင်းငှါ
သင်, ရေးရန်ညွှန်ကြား, shoot နှင့်ဗီဒီယိုတည်းဖြတ်နိုင်ရောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရည်အသွေးကိုစံချိန်စံညွှန်းများတွေ့ဆုံစဉ်အမှတ်တံဆိပ်သေံ & စကားသံကိုထိန်းသိမ်းခြင်း
မြင့်မား, ဖန်တီးမှုစနစ်တကျနှင့်အရေးအကြီးဆုံးကတော့, FUN
အလွန်ကြီးစွာသောဇာတ်လမ်း Teller သည်နှင့်အနှစ်တစ်ထောင်မျိုးဆက်အားဟောပြောဖို့ဘယ်လိုသိတယ်
အဘယ်သူမျှမတိကျတဲ့ software ကိုအတှေ့အကွုံလိုအပ်ပါသည်, ဒီကသင်၏သမ္မာသတိမှာဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့သင်မလိုအပ်သောအရာကို tools များသိထားသင့်သောသူတို့ကိုသုံးစွဲဖို့ဘယ်လို
ဗီဒီယိုကိုတွဲပြီးနေရာချခံရဖို့ဂရပ်ဖစ်နဲ့ animations တွေကိုဖန်တီးပေးနိုင်
Buzzfeed infovideos-animations တွေကိုစာသား, နဲ့ audio / Video ကျော်ဂရပ်ဖစ်စဉ်းစားပါ
အကောင်းဆုံးကတော့, ငါတို့သည်သင်တို့ပြီးသားပိုင်ဆိုင်ခြင်းနှင့်အတူအကျွမ်းတဝင်ဖြစ်ကြ၏ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ကိုချစ်ချင်ပါတယ်; ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဟာ့ဒ်ဝဲပိုင်ဆိုင်နေတဲ့လိုအပ်ချက်မဟုတ်ပါဘူး
** SF Bay Area တွင်တည်ရှိသည်သာလျှင်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ ** ထည့်သွင်းစဉ်းစားလိမ့်မည်
Pay ကိုဖြင့်စီမံကိန်းကိုဖြစ်ပါသည်, နှင့်စျေးကွက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိလိမ့်မည်
ကျနော်တို့ဆိုရင် single လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်သူတို့ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုရှာဖွေ, ကြှနျုပျတို့သငျသညျအဖွဲ့ join ရှိသည်ဖို့ကိုချစ်ချင်ပါတယ်ကူညီပေးနေ၏မစ်ရှင်အတွက်ယုံကြည်!